amụma nzuzo
Welldone Electronics Ltd. na-enye ndị ahịa anyị ọtụtụ uru na-achọ ikesa ozi nzuzo n'aka ndị ahịa anyị.Welldone Electronics Ltd. na-akpachapụ anya ọ bụla iji dobe usoro nchekwa maka ndị ahịa anyị.
Otu anyị si echekwa ma jiri ozi gị
Ozi ị nyere mgbe ị na-edebanye aha iji na mgbe ị na-eji webụsaịtị anyị nwere ike iji anyị:
Maka ebumnuche nke iji webụsaịtị anyị, gụnyere ịkpọtụrụ gị n'ihe gbasara ajụjụ ọ bụla i welitere;
Iji kpọtụrụ gị ma emesịa ịgwa gị maka ọkwa ọkwa ndị ọzọ, onyinye pụrụ iche, ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ mmemme enyere sitere na Welldone Electronics Ltd., ndị mmekọ ya na ụfọdụ ndị mmekọ azụmahịa nke ndị ọzọ nke anyị chere na ọ nwere ike ịmasị gị n'ezie.Anyị ga na-enye gị nhọrọ ka ị ghara ịkpọtụrụ gị n'ụzọ dị otú a ma ọ bụ ma ọlị ma ị nwere ike ịme nhọrọ ahụ n'oge ọ bụla.
Maka ebumnuche nchịkwa ma ọ bụ iji nyere anyị aka ịzụlite na melite onyinye anyị;
Maka mgbochi mpụ ma ọ bụ ebumnuche nchọpụta.
Nbufe ozi site na ịntanetị anaghị adịcha mma mgbe niile.Anyị enweghị ike ikwe nkwa nchekwa nke data gị bufere na saịtị anyị;nnyefe ọ bụla dị n'ihe ize ndụ nke gị.Ozugbo anyị nwetara ozi gị, anyị na-eji atụmatụ nchekwa nwaa igbochi ohere na-enwetaghị ikike.